Home - AHF Myanmar
ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ AIDS ဆိုသည်မှာ
ခုခံအားကျဆင်းမူ ကူးစက်ရောဂါ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) ဆိုသည်မှာ Human Immunodeficiency Virus (HIV) ခေါ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ရောဂါကို ခုခံတိုက်ဖျက်သည့် စနစ်၏ လုပ်ငန်းထမ်းဆောင်မှုများ ကျဆင်းကာ အခြားသော ကူးစက်ရောဂါများ၊ ကင်ဆင်ရောဂါများ ပိုမိုဆင့်ပွားဖြစ်ပွား တက်သည့် ကူးစက်ရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။
ရောဂါပိုးရှိသူနှင့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမိပါက (ဥပမာ- မုဒိမ်းကျင့်ခံရခြင်း) လိင်ဆက်ဆံပြီး ၇၂ နာရီအတွင်း HIV ပိုးကိုနှိမ်နင်းသော Anti-retroviral drug ဆေးသုံးမျိုး (သို့) နှစ်မျိုးကို တစ်လ သောက်သုံးပါကရောဂါ ကူးစက်မှုကို လျှော့ချစေနိုင်ပါသည်။ AIDS ကုသရာတွင် ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အချင်းဖြစ်ပွားပြီးရ၂ နာရီအတွင်း ဆက်သွယ် အကြံဉာဏ်တောင်းယူပါ။
WORLD AIDS DAY MYAWADDY Posted by Saw Heh Mu Htoo on Saturday, December 1, 2018
WAD awareness raising campaign at December public walking and physical exercise in the morning of 1 December. #WAD2018 #AHFMyanmar #Myawaddy WAD awareness raising campaign at December public walking and physical exercise in the morning of 1 December. #WAD2018 #AHFMyanmar #Myawaddy Posted by AHF Myanmar on Sunday, December 2, 2018
Posted by Saw Lal Loe on Saturday, December 1, 2018